Cusboonaysiinta software – Bogga 19 – Windows – Vessoft
Qalabka ayaa ah maamul ka kooban aaladaha ka LG Electronics. Waxa ay taageertaa gurmad iyo update ah darawallada qalabka.
software waxaa loogu talagalay in uu akhriyo buugaagta shidin on your computer. software waxa uu ka shaqeynayaan lagama maarmaanka ah si ay u maareeyaan maktabadda elektarooniga ah.
KeePass 2.39 Standard iyo Portable
Tababaraha ayaa lacag la’aan ah eraygaaga sirta ah iyo xogta qarsoon. Software wuxuu isticmaalaa isku geynta gaar ah sirta ah ee sirta macluumaadka ku kaydsan.
Tani waa antivirus si looga ilaaliyo fayruusyada noocyada kala duwan, xayiraan hanjabaadaha internetka iyo ogaadaan dhibaatooyinka ammaanka ee nidaamka.
Software in ay ku daydaan shaqada ee mouse iyo keyboard isticmaalaya joysticks ciyaaraha ah. Software wuxuu taageeraa qaabeynta isku muhiimka ah ee keyboard ama jiirka iyo bixisaa ay Khayaadka oo deg dega ah ee joystick ah.
Ciyaaryahanka ayaa saxaafadda functional oo taageero qalab ka arrinsashada audio iyo video files. Software ka kooban barbaraha multiband in astaysto oo tayo leh loo maqli karo ee files warbaahinta ka.
software The ku cadaadisaa iyo decompress buugagga taariikhda oo kala duwan. software wuxuu taageeraa diinta ka dhexeeya qaabab archive iyo awood inuu ka soo kabsado buugagga taariikhda oo burburay.
qalab The si loogu badalo faylasha caan ka mid format in kale. software The kuu ogolaanayaa inaad Customize tayada qaab beddelidda iyo download videos ka soo adeegyada caanka ah.
Ciyaaryahan warbaahinta ayaa la taageero ka audio iyo video qaabab loo jecel yahay. Software ayaa awood u si aad u eegto macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan files oo screenshots ah.
qalab A awood for falanqaynta faahfaahsan iyo processing ee files image. software waxay leedahay set badan oo ah filtarrada, plagins iyo qalab kale.
Tool si aad u eegto waxa ku jira qalab ka Apple. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan in nidaamka file ah qalab iyo si loo maareeyo codsiyada.
Tool in ay ka shaqeeyaan la browser Internet Explorer. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si aad u hubiso waafaqsan hab dhaqanka xeerka, qaabka iyo design qoraalkii kala duwan ee browser ah.
HyperCam 5.0.1802.09 Home iyo Business
qalab The functional si ay u qoraan falalka shaashadda. software The kuu ogolaanayaa inaad si edit faylasha diiwaan oo si deg deg ah u abuurin waxaan bandhigyo video.
qalab The si ay ula socdaan xaaladda ka mid ah qaybaha kala duwan ee computer. software waa ay awoodaan in ay soo bandhigaan hadda, maximal oo yar qiimaha danab qaybaha kombiyuutarka.
Software in la beddelo goobaha ciyaarta iyo isticmaali khiyaameeya ee Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 Console. Software wuxuu taageeraa tiro badan oo ah kulan caanka ah ee qaybaha kala duwan.